Accueil > Gazetin'ny nosy > Ceni: Taratra ny tsy ho fahombiazan’ny fifidianana
Ceni: Taratra ny tsy ho fahombiazan’ny fifidianana
Tsy tratran’ny CENI (Vaomiera mahaleo tena momba ny fifidianana) ny tsy fahazoan’ny isa folo tapitrisa eto Madagasikara amin’ny taona 2018 ho avy ity. Isan’ny fanamby lehibe napetrak’ity rafi-panjakana manokana mahakasika ny fifidianana ity ny fahazoana io isa io. Raha vao nitsangana ity rafitra ity dia nanambara ingahy Hery Rakotomanana izay filohany fa fanamby ho azy ny fahatratrarana izany. Efa ho roa taona izao no nipetrahany teo amin’ny toerana nefa mbola tsy ampy hatrany amin’ny telo hetsy (300 000) mahery any ho any izany hoy ingahy Thierry Rakotomanana izay filoha lefitra raha nihaona tamin’ny mpanao gazety vitsivitsy izy tamin’ity herinandro ity.
Ny avy any amin’ny faritanin’i Fianarantsoa sy Antananarivo no hita fa nisy fiakarany maromaro satria raha ny fanisana azo farany dia nahatratra 1 663 218 izany tamin’ny faha 17 janoary 2018 lasa teo raha toa ka 1 329 238 tamin’ny fihodinann faharoa ny fifidianana tamin’ny 2013. Ny teto amin’ny faritanin’Antananarivo indray dia 2 773 048 ny fihodinana faharoa ny taona 2013, ka lasa 3 159 044 izany ny faha 17 janoary 2018 lasa teo.
Nanambara nefa ny filohan’ny Ceni Hery Rakotomanana fa tokony ho 13 tapitrisa no ho isan’ny mpifidy raha ny vinavina.
Misy mpifidy miisa 4 tapitrisa mahery izany no tsy afaka hanefa ny adidiny amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena manaraka eo. Mbola mety hahery an’izany aza raha ny fandinihan’ny mpanaraka ny raharaha pôlitika sy ny antontan’isa eto Madagasikara satria misondrotra 3, 3 % isan-taona ny Malagasy. Ny tarehimarika tamin’ny taona 1993 ihany nefa no navadibadika teto ka nataon’ny mpitondra fanjakana tamin’izay nampety azy. Io filalaovana ny antontan’isa io no nataon’ingahy Ravalomanana Marc sy Ratsirahonanan Norbert Lala tamin’ny taona 2001 iny ka nilazany fa “1er tour” dia vita ny fifidianana ka nangalarany sy nanaovany amboletra tamin’ny fanonganam-panjakana ankolaka tamin’iny fotoana iny. Nanampy azy koa ny FFKM tamin’izany ka dia nahazo aina izay tsy izy ity filoha teo aloha ity.
Taratra ny tsy fahombiazan’ny fanomanana ny fifidianana ity zava-mitranga amin’ny CENI ity. Tsy izy ireo ihany nefa no tompon’antoka amin’izany fa ny fanjakana koa. Tsy nanao ny asany ara-dalàna ny ministeran’ny Atitany sy ny mponina izay tokony hanana ny tarehimarika mazava amin’ny fifidianana. Voalaza ny depiote voafidy avy any Arivonimamo, ingahy Rodin fa tsy nampiasana ny vola izay nomen’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena fa ny ampahany ihany no nampiasana hatramin’izao ka tsy vita ny fanaovana fitsarana mitety vohitra hahazoana kaopia sy kara-panondro. Tsy navoakan’ny mpitantam-bola ao amin’ny ministeran’ny Vola izany vola izany, hoy ihany izy. Toa izany koa ny avy amin’ny governemanta manontolo izay tompon’antoka amin’ny fampandehanana ity fifidianana ity. Tsy ampy ny fandraisana andraikitra ka izao no vokany.
Manahy ny hisian’ny krizy vaovao noho izany ny mpanara-baovao maro noho ny fahitana ny zavatra tsy mandeha amin’ny laoniny mitranga ankehitriny. Misy aza no mbola manontany hoe hisy marina ve ny fifidianana?